मधुमेह नियन्त्रणमा ,आयुर्वेदिक औषधिको कमाल !! | सुदुरपश्चिम खबर
मधुमेह नियन्त्रणमा ,आयुर्वेदिक औषधिको कमाल !!
चिकित्सा जगतमा रोग उपचारका अनेकौं पद्धति छन् । भारत र नेपालको गाउँ गाउँमा प्रचलित स्वदेशी पद्धति आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हो भने विज्ञानले विकसित गरेको आधुनिक चिकित्सा पद्धतिलाई एलोप्याथी भनिन्छ ।
पुदिनाको सेवन गर्नाले हुन्छन् यस्ता फाइदाहरु !!
अब यो सर्वविदित नै छ मानिसको शरीर यति जटिल स्वचालित यन्त्र हो, यसका बारे जति जति अध्ययन हुँदै गइरहेको छ त्यति मात्रामा नै यसको संरचनाले वैज्ञानिकहरुलाई हैरान पर्दै गइरहेको छ । अब त आधुनिक चिकित्साशास्त्रले स्वीकार गरीसक्यो, संसारका सबै मानिस शारीरिक सञ्चालनको दृष्टिले फरक फरक हुन्छन् । दुईजनालाई ज्वरो आएको छ भने उनीहरुको ज्वरो एउटै औषधिले निको नहुन सक्छ ।
तपाइँ हामीलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो, मानिसको शरीरमा हुने सबै रोगको उपचार कुनै एउटै चिकित्सा पद्दतिले हुन सम्भव छैन । आधुनिक चिकित्सा विज्ञानबाट निको नभएका अनेकौं रोगीको आयुर्वेदले सफल उपचार भएको प्रमाण हाम्रो चारैतिर रहेका छन् ।
माथी वर्णित दुबै चिकित्सा पद्दतिको सम्मिश्रणले उपचार गर्ने दिशामा भारतको ‘अल इन्डिया इन्स्टिच्युड अफ मेडिकल साइन्स’ (एम्स) ले महत्वपूर्ण सफलता पाएको छ । एम्सका अनुसन्धानकर्ताले डाइबिटिजबाट पीडित रोगीमा आयुर्वेदिक औषधि बीजीअर ३४ र एलोप्याथिक औषधि ग्लीबेक्लामाइड (नष्दिभलअबिmष्मभ)को संयुक्त प्रयोग गरी अनुसन्धान गरेका छन् ।
आश्चर्यजनक रुपले यस प्रयोगबाट डाइबिटिज नियन्त्रण हुनुको साथै नराम्रो कोलेस्ट्रोल समेत नियन्त्रण भएको छ । नराम्रो कोलेस्ट्रोलका कारण हृदयघातसम्मको खतरा हुन्छ ।
एम्सको फर्माकोलोजी विभागमा सम्पन्न भएको यस अनुसन्धानले डाइबिटिज तथा नराम्रो कोलेस्ट्रोल नियन्त्रणमा उत्साहजनक परिणाम प्राप्त भएका छन् । डाइबिटिजको आयुर्वेदिक औषधि बीजीआर–३४ भारतको अग्रणी अनुसन्धान र विकास गर्ने स्वायत्त संस्था ‘काउन्सिल अफ साइन्टिफिक एण्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च’ )ले बनाएको हो ।
यो औषधि खुला बजारमा उपलब्ध छ ।आयुर्वेदिक औषधि बीजीआर–३४ इन्सुलिनको स्तर बढाउन र लेप्टिन हर्मोनको स्तरलाई कम गर्न सक्षम छ । तर, एलोप्याथको औषधि ग्लिबेँक्लामाइडसँग यसको प्रयोगले झनै चामत्कारिक परिणाम देखाएको छ । दुवै औषधिको संयुक्त प्रयोगले इन्सुलिनको स्तरमा वृद्धि हुनुका साथै लेप्टिन हर्मोन नियन्त्रित भएको पाइयो ।
शरिर स्वस्थ राख्न सुत्नु अघि गर्नुहोस् यी कार्य !!
ओली पक्षीय राष्ट्रिय युवा संघको केन्दीय अध्यक्ष र सचिवको नेतृत्वमा : कञ्चनपुरका दुई युवा नेता !
बैतडीमा छोरीको हत्या गर्ने बुवा पक्राउ !
शास्त्रका अनुसार शरीरमा भएका यी संकेतहरुले तपाईको बारेमा यि कुराहरु बताउँछ ।